Hositisma - Wikipedia
Ny hositisma dia fihetsiketsehana ara-piarahamonina sy ara-pivavahana vokatry ny fampianaran' i Jan Hus. Io fihetsiketsehana io dia nanohy ny akony teo amin' ny fihetsiketsehana ara-pivavahana maro amin' izao fotoana izao, dia ny Fiangonana môraviana sy ny Fiangonana hosita tsekôslôvaka. Ny mpanaraka ny fampianaran' i Jan Hus dia atao hoe Hosita.
I Jan Hus[hanova | hanova ny fango]
Mpitoriteny hatramin' ny taona 1402 tao amin' ny sapelin' i Bethléem ao Praga i Jan Hus sady nitoriteny niaraka tamin' ny olona hafa koa momba ny fiverenana amin' ny Fiangonana apôstôlika sy ara-panahy ary mahantra. Nihevitra i Jan Hus fa ny fanavaozam-piangonana dia tokony handalo amin' ny fahefan' ny olon-tsotra tsy mpitondra fivavahana. Izany filazana izany dia nisy akony teo amin' ireo andriana ambony izay nahatsapa ny fahafahany haka ny fananan' ny fiangonana.
Nisy koa ny fihetsiketsehana milenarista niseho, izay niresaka ny alin' ny mpaminany sandoka sy ny antikristy, dia ireo Tabôrita izany. Nihamafy hatrany ny firesahana ny amin' ny fotoana farany, ka maro ireo te hahita indray ny Fiangonana voalohany. I Jan Hus dia nampangain' ny mpampianatra alemàna tao Praga. Ny mpanjaka Venceslas I dia nanohana an' i Jan Hus tamin' ny voalohany, avy eo rehefa niteraka ny fitroarana tamin' ny taona 1412 hanoherana ny fivarotana indolzansa (izay nandraisan' i Venceslas anjara) dia tsy nanohana azy intsony. Voantso tao amin' ny Kônsilin' i Kônstansa tamin' ny taona 1414 mba hanamarina ny zavatra ataony i Jan Hus ka nankao tokoa; naiditra am-ponja izy satria niaiky fa nanao fampianaran-diso, ka nodorana velona tamin' ny taona 1415. Ny mpianany atao hoe Hierônimô avy any Praga izay noheverina fa namerim-pahadisoana dia nodorana koa tamin' ny taona manaraka.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Hositisma&oldid=1010430"
Voaova farany tamin'ny 28 Martsa 2021 amin'ny 13:05 ity pejy ity.